Nasi isizathu sokuba kufuneka udibanise ii-imeyile kunye neQhinga leendaba zezeNtlalontle | Martech Zone
Sasiba nesibindi xa umntu esabelana nge email Ukuqobisana kwimidiya yoluntu. Esona sizathu siphambili sokungavumelani ne Ukuqobisana Ingxoxo yayikukuba akufuneki ibe ngumbuzo wokukhetha enye okanye enye, kufanele ukuba kube ngumcimbi wendlela yokufumana ngokupheleleyo isixhobo ngasinye.
Abathengisi kufuneka bazibuze ukuba kunokwenzeka njani email marketing kwaye urhwebo eendaba zentlalo sebenza ukuba iinzame zalungelelaniswa. Ingxaki yile ngama-56% kuphela Abathengisi badibanisa intlalontle kunye nenkqubo yabo yokuthengisa nge-imeyile.
Sebenzisa uluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile ukukhulisa iindlela zakho zentlalo- kwaye ngokuchaseneyo- yimeko yokuphumelela. Nangona kunjalo, ilizwi lesilumkiso: abathengisi kufuneka balumke bakhumbule ukuba yintoni injongo yejelo ngalinye. Ngelixa ugcina iinjongo zamajelo akho zibekelwe amandla kunye neenjongo ezithile kubalulekile kwimpumelelo yokuhambisa ishaneli, inyani kukuba ukusebenzisa ijelo elinye ukuphembelela impumelelo yenye sisicwangciso esiliqili sentengiso. Ngokudibanisa i-imeyile kunye namacebo eendaba ezentlalo, unokonyusa ukufikelela kwegama lakho, ukongeza kwizikhokelo zakho kunye nokuzihambisa phantsi kwefaneli yokuthengisa.
Esinye seziphumo eziphambili ezazivelele kuthi Kutheni usongeza ulwabelwano ngokwasentlalweni kwii-imeyile zakho?
Ukudibanisa u-Facebook wongezwa Izabelo ezi-31 ii-imeyile ezili-100 zivuliwe.
Ukudibanisa i-Twitter yongezwa Izabelo ezi-42 ii-imeyile ezili-100 zivuliwe.
Ukudibanisa i-LinkedIn yongezwa Izabelo ezi-10.3 ii-imeyile ezili-100 zivuliwe.
Ukudibanisa kuGoogle + kongezwe Izabelo ezi-13 ii-imeyile ezili-100 zivuliwe.
Ukudibanisa iPinterest yongezwa Izabelo ezi-14 ii-imeyile ezili-100 zivuliwe.
Qiniseka ukuba ufunda isikhokelo sokugqibela kwiReachmail, Izibonelelo zokudibanisa i-imeyile yakho kunye neQhinga leendaba zezeNtlalontle.
tags: emailemail kunye facebookimeyile kunye noGoogleimeyile kunye ne-linkinimeyile kunye nepinteresti-imeyile kunye nemidiya yoluntuimeyile kunye ne-twitteremail Marketingimeyile vs imidiya yoluntuFacebookfacebook kunye ne-imeyilegoogle kunye ne-imeyileGoogle +LinkedInlinkin kunye ne-imeyileTwilleypinterest kunye ne-imeyilefikelelaImidiya yokuncokolaimidiya yoluntu ngokuchasene ne-imeyileImidiya yokuncokola vs i-imeyileTwittertwitter kunye ne-imeyile
Uluhlu lweeNtengiso eziPhakathi zoThengiso lwe-Intanethi